箴言 2 CCB – Mmɛbusɛm 2 ASCB | Biblica
箴言 2 CCB – Mmɛbusɛm 2 ASCB
Nyansa Ho Mfasoɔ Wɔ Abrabɔ Mu
1Me ba, sɛ wotie me nsɛm,
na woma me nkyerɛkyerɛ tena wo mu a,
2sɛ wowɛn wʼaso ma nyansa
na wode wʼakoma ma nteaseɛ,
3na woma wo nne so frɛ nhunumu
na wosu frɛ nteaseɛ,
4na sɛ wohwehwɛ no te sɛ deɛ wohwehwɛ dwetɛ
na wo hwehwɛ no sɛdeɛ worepɛ ademudeɛ a ahinta a,
5ɛno na wobɛte Awurade suro ase
na woahunu Onyankopɔn ho nimdeɛ.
6Awurade ma nimdeɛ,
na nʼanom na nyansa ne nteaseɛ firi ba.
7Ɔkora nkonimdie ma wɔn a wɔteneɛ,
ɔyɛ kyɛm ma wɔn a wɔn akwan yɛ pɛ,
8ɔwɛn deɛ ɔtene akwan,
na ɔbɔ wɔn a wɔdi no nokorɛ no akwan ho ban.
9Ɛno na wobɛte deɛ ɛyɛ ne deɛ ɛyɛ pɛ
ne deɛ ɛfata, ɛkwan biara a ɛyɛ ase.
10Afei nyansa bɛwura wʼakoma mu,
na nimdeɛ ayɛ ahomeka ama wo kra.
11Adwene bɛbɔ wo ho ban
na nteaseɛ ahwɛ wo so.
12Nyansa bɛyi wo afiri amumuyɛfoɔ akwan mu,
ɛbɛyi wo afiri nnipa a wɔn nsɛm yɛ basabasa nsam,
13na wɔmane firi akwan pa so
kɔnante esum akwan so,
14wɔn a wɔn ani gye bɔneyɛ ho,
na wɔdi ahurisie wɔ bɔne mu basabasayɛ ho,
15wɔn a wɔn akwan yɛ kɔntɔnkye
na wɔyɛ abonsamfoɔ wɔ wɔn akwan mu.
16Nimdeɛ bɛgye wo afiri ɔbaa waresɛefoɔ no nsam,
afiri ɔbaa warefoɔ sansani a ɔka nnaadaasɛm ho,
17deɛ wagyaa ne mmabaawaberɛ mu kunu
na wapo apam a ɔyɛɛ wɔ Onyankopɔn anim no.
18Ne fie yɛ ɛkwan a ɛkɔ owuo mu
na nʼakwan kɔ awufoɔ honhom nkyɛn.
19Obiara a ɔkɔ ne nkyɛn no nsane mma
anaasɛ ɔrensi nkwa akwan so.
20Enti wobɛdi nnipa pa anammɔn akyi
na woanante ateneneefoɔ akwan so.
21Ɛfiri sɛ wɔn a wɔtene bɛtena asase no so,
na wɔn a asɛm nni wɔn ho no na wɔbɛka hɔ;
22na wɔbɛtwa amumuyɛfoɔ afiri asase no so,
na wɔatɔre atorofoɔ ase.
ASCB : Mmɛbusɛm 2